Body Odor / Body Odour. Natural Treatments And Remedies | The Natural Health Dictionary
Isi Odor / Odor aru. Ọgwụ Ọgwụ na Ọgwụ
2 A na - ejikọ aka na anụ ahụ na nri.
Ire ísì (ma ọ bụ isi ahụ) bụ isi na-adịghị mma nke ahụ mmadụ na-enye apụ ma ya na mmadụ na-adịghị ọcha ma ọ bụ adịghị ọcha.
Nke a abụghị ikpe mgbe niile.
Madụ nwere ike ịdị ọcha nke ukwuu ma nwee ike ịsa ma ọ bụ saa ahụ oge niile mana ọ ka nwere ike ịnụ isi ya.
ebe ọ bụ na bacteria akpata ọtụtụ isi anụ ahụ metụtara, Ngwakọta dị ọcha nwere ike inye aka ịchịkwa mmepụta nke isi ahụ. Raygba ma ọ bụ tinye Ọcha ọcha gaa na mpaghara emetụtara ma were 1-2 droppers nke Pure Silver 2x kwa ụbọchị. Nke a nwekwara ike inye aka na ume iku ume.
Iji nnu n’ime ebe ncha saa ahụ nwekwara ike inye aka belata ahụ mmadụ.
Uda na-adighi nma nwere ike isi na sodium pere mpe n’ime nri. (Lee Nnu)
A na - ejikọ aka na anụ ahụ na nri.
Ihe oriri na ọ drinksụ Acụ Acid bụ isi ihe na-akpata isi ahụ. (Lee nri)
Ndị nwere oke ahụ mmadụ adịghịkwa mineral. ShopFreeMart PureCopper na Siaga nwere ike inye aka belata anụ ahụ. Mụ onwe m etinyela ShopFreeMart NVIRO ncha na ụkwụ m ozugbo dị ka ude mmiri, nke wepụrụ isi n'ụkwụ ozugbo.
Ọ bụ ezie na ihe mmadụ nwere nwere mmetụta metụtara isi ahụ, ọ nwere ike ịmetụta “ezigbo isi ísì ọma” ahụ ha na-eji ekpuchi isi ísì ọjọọ.
Ihe ọ bụla anyị na-etinye na ya ma ọ bụ n’ahụ anyị, a ga-ewepụrịrị ọzọ, site na mmamịrị, ma ọ bụ site na akpụkpọ ahụ ka ọsụsọ.
O kwere omume na isi uto kachasị gị mma nwere ike ịbụ ihe kpatara nsogbu gị. Mgbe a gbasasịrị ya n’akpụkpọ ahụ, ọ na-abanye n’ime ọbara ma usoro iwepụ anụ ahụ ghasasịa ya.
Cheedị banyere nke a, prepare na-akwadebe ma rie nri mara mma nke mkpụrụ osisi na strawberries na-ekpo oke ekpo, na-eji akwa salad kacha amasị gị.
Ọ mara mma ma ọ bụ isi na-atọ ụtọ mgbe ọ na-apụta na njedebe nke ọzọ, ọ bụ!
Cheregodi ihe atụ-kwụ ọtọ, ma ọ bụ otu ihe ahụ na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ kachasị amasị gị.
Ọ bụrụ na kemịkalị ndị ọzọ dị na ha, ọ ga-eme ka ahụ ha gbajie ya ma ọ bụ wepụ. Mgbe a na-ekpochapụ ha n’anụ ahụ, ha ga-anụrịrị ihe dị iche iche!
Ihe na Isi Oduu, Isi Oduuakpado anụ ahụ, isi ahu, isi na-akpasu iwe, ọchị